November 12, 2013 – democracy for burma
THAN SHWE DEATH -NOT CONFIRMED :ဦးသန်းရွှေ နေပြည်တော် သူ၏နေအိမ်၌ လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်
On November 12, 2013 November 12, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ဦးသန်းရွှေ နေပြည်တော် သူ၏နေအိမ်၌ လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်
မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့သော အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ဦးသန်းရွှေဟာ ယနေ့ ၁၀.၁၁.၂၀၁၃ နံနက် ၁၀:၁၅ မိနစ်အချိန်မှာ နေပြည်တော် သူ၏နေအိမ်၌ လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီလို့ ခိုင်လုံတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးထံမှ သတင်းရရှိပါတယ်။
လူသိရှင်ကြာ မကြေငြာသေးတာကိုတော့ ဘာကြောင့်ဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။ မသေဆုံးခင်တစ်ပက်လောက်ကခဲက မကြာခဏ သွေးများအန်ပီး အိပ်ယာထဲလဲနေခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်အလောင်းကိုမည်မျှကြာကြာထားမည် မီးရှို့မည် မြေမြုပ်မည်ကိုတာ့ အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။
BY – from email
MYANMAR government hospital slammed as paralyzed man found abandoned at Myeik cemetery
On November 12, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
MYEIK—A paralyzed man rejected for health care atalocal hospital was abandoned atacemetery in Myeik last Thursday, one of the residents who left him there has confirmed.
On November 3,adestitute man staying at an old house on B Street in Kangyi Ward, Myeik, sufferedastroke. According to locals, the man is only about 30 years old but suffered the stroke due to heavy drinking.
When the ward administrator andagroup of local residents brought him to the government hospital, hospital officials learned that the man has no relatives and was living alone.
“We sent him to the hospital on November 3. We also hiredaman to help him. But the hospital staff said we had no permission to bring him there because he had ‘only’ sufferedastroke. They repeatedly told us to take back the paralyzed man,” saidaKangyi local who asked not to be named.
“We are not the blood relatives of that patient. He has no relatives. That’s why we sent him toagovernment hospital. But the hospital forced us to take him back, even though the man can no longer walk. We asked the hospital how we could possibly provide health care to him when even the government hospital cannot do so. They objected to us and so we had to take him back.”
The Kangyi local said that last Thursday the group took the man to the Kalwin all-faith cemetery.
“Six people took the paralyzed man and abandoned him at the cemetery at our village. They (the men) left soft drinks with him. Previously,aman was also abandoned and left to die. We had to bury that man,” confirmed another Kalwin villager.
The news about the paralyzed man spread widely among Facebook users in Myeik, so officials had to take him back to the hospital on Sunday, according to local residents.
MYANMAR-BURMA: RCSS STATEMENT ETHNIC ARMED CONFERENCE 9.NOV.2013 BURMESE-ENGLISH
THAILAND: 8 associations in the fishery industry have vowed to stop employing illegal labors
On November 12, 2013 November 12, 2013 By Burma Myanmar newsIn AseanLeaveacomment
BANGKOK, 12 November 2013 (NNT) – 8 associations in the fishery industry have vowed to stop employing illegal labors inabid to help the country get out of the US’s Tier2Watch List.
Inadeclaration signing ceremony chaired by Minister for Agriculture Yukol Limlamthong, 8 associations have come together to announce their intentions to stop employing illegal migrant workers. According to the minister, Thailand is on the US’s Tier2Watch List for human trafficking, and if it does not make changes now, it could be included in the Tier3Watch List; which will haveatremendous effect on the country’s export. Thailand has been on the US’s watch list for4consecutive years.
These associations included the National Fisheries Association of Thailand, the Overseas Fisheries Association, the Thai Fishmeal Producers Association, the Thai Feed Mill Association, the Thai Frozen Foods Association, the Thai Shrimp Association, the Thai Tuna Industry Association, and the Thai Food Processors’ Association.
Meanwhile, Mr. Isara Vongkusolkit, the Chairman of The Thai Chamber of Commerce, said the 8 associations would also focus on supporting and enhancing the workers’ quality of life as well as declaring war against child labor. He also expressed his belief that, with all sides’ concerted efforts, the problem of human trafficking will eventually be eliminated.
MYANMAR BURMA President Office : ★OIC ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ခွင့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ သဘောထား★
★OIC ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ခွင့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ သဘောထား★
၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာများ တွေ့ဆုံပွဲကို နေပြည်တော် သမ္မတအိမ်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် News Watch ဂျာနယ် သတင်းထောက်က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း OIC ရုံးများ ဖွင့်ခွင့် မပေးသည့် ကိစ္စ၊ ကချင်ပြည်နယ်သို့ ICRC ၀င်ခွင့်မပေးသည့် ကိစ္စ တို့ကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက အကျယ်တ၀င့် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
OIC ရုံးခွဲဖွင့်ခွင့် မပြုသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ ဖြေကြားချက် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
♦ တစ်အချက်က OIC ကိစ္စ။ OIC ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ခုနကလို ဒီဆူပူမှုပဋိပက္ခပေါ့။ ဒါတွေကတော့ ကျနော်တို့အားလုံးသိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဆူပူမှုပဋိပက္ခနှင့်အတူ ခုနလို သေဆုံးတာတွေဒဏ်ရာ ရတာတွေဟာ တခြားဖြစ်စဉ်တွေနှင့် ယှဉ်ရင်တော့သိပ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဒါများများစားစားမရှိလှဘူးလို့ ဒီလိုပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းခုနကလိုမီးရှို့တာကြတော့ ရွာတစ်ရွာမှာ ခုနလိုတစ်အိမ်မီးရှို့ဆိုရင်သက်ကယ်နဲ့ ဓနိနဲ့ နေနေကြတဲ့အိမ်တွေဆိုတော့ အကုန်လောင် တာပါဘဲ။ အဲဒီတော့ မီးရှို့တဲ့အတွက်ကြောင့် ခုနလိုအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်တာတွေက ကျနော်တို့များပါတယ်။
♦ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဒီလူတွေကို ထမင်းကျွေးထားရ ပါတယ်။ သူတို့ကိုကျွေးထားတဲ့စရိတ်က ဘယ်လောက်ကုန်တယ်ဆိုရင် တစ်နေ့တစ်နေ့ကို ဒေါ်လာတစ်သန်းဖိုး လောက် ကျနော်တို့ ကုန်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒေါ်လာတစ်သန်းဖိုး လောက်ကုန်တဲ့ဟာကို အစိုးရကလည်းစိုက် မပေးနိုင်ဘူး။ ပြည်သူလူထုအကူအညီနဲ့လည်း ဒီလောက် အကုန်ခံကျွေးနိုင်တဲ့ အနေအထား မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ ပြည်ပကအကူအညီတွေကို ကျနော်တို့က လူသားချင်းစာနာတဲ့ ကူညီမှုဆိုတာနော် ဒါတွေကို ကျနော်တို့လက်ခံရပါတယ်။
♦ အဲဒီတော့ လူသားချင်းစာနာတဲ့ အကူအညီတွေလက်မခံဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ ခုနလို လူမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ စွပ်စွဲကြတော့မှာ။ ဒါကတော့တစ်ကမ္ဘာလုံး လက်ခံရတဲ့ကိစ္စပါ။
♦ အလားတူပါဘဲ ကျနော်တို့ OIC နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့လည်း ကျနော်တို့ ဒါ ဘာသာရေးအရမခွဲခြားပါဘူး။ လူမျိုးအရ မခွဲခြားပါဘူး။ လူသားချင်းစာနာတဲ့ အကူအညီတွေ ကျနော်တို့ပေးချင်ပါတယ်။ ပေးလည်းဘဲ ပေးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
♦ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ ဒီလို OIC နှင့် စာချုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ OIC ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဌာန တစ်ခုအနေနှင့် ဒီနယ်စပ်ဒေသ ဝန်ကြီးဌာနအောက်က ဌာနတစ်ခုနဲ့ စာချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
♦ စာချုပ်တာကတော့ ကျနော်တို့ ရန်ကုန်မှာ ဒီ OIC ရုံးဖွင့်မယ်တို့၊ နောက်တခါ စစ်တွေမှာ OIC ရုံးဖွင့်မယ်တို့ ဒါတွေဟာ စာချုပ်ထဲမှာလုံးဝမပါပါဘူး။ ဒါလူတွေရဲ့ကောလဟာလတွေပါ။ ဟိုပြောဒီပြော နဲ့ ဒီလိုပြောနေတဲ့ဟာတွေပါ။
♦ ဒါကြောင့်မို့ ဒီကောလဟာလတွေကို ဒါတွေဟာကျနော်တို့ ဟိုဒင်း မဖြစ်ပါဘူး။ ဘယ်သူကမှလဲ ခုနလို ဒီစာချုပ်ကို သေချာလည်းဖတ်ပြီးတော့ ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ သိပါတယ်၊ စာချုပ်ထဲမှာ ခုနပြောသလို ရန်ကုန်မှာဖွင့်မယ်တို့၊ စစ်တွေမှာဖွင့်မယ်တို့ ဆိုတာလုံးဝ ကျနော်တို့မပါပါဘူး။
♦ အကယ်၍ ဖွင့်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ကျနော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ တားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြည်သူကမလိုလားဘူး။ ပြည်သူမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့က တားဆီးသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ခုနလို ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ ဒါကိုကျနော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ တာဝန်ယူပါတယ်။ ဒါတွေကျနော်တို့ လုံးဝဖွင့်ခွင့်မပြုပါဘူးဆိုပြီးတော့ ဒီလိုကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်တင်ပြပါ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာများ တွေ့ဆုံပွဲ မတိုင်မီ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက် ရက်စွဲဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ထုတ်ဖော် ပြောကြားချက်သတင်းတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်-
♦ ပြည်သူလူထုအကြားတွင် ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးအပ်ရာတွင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် OIC ရုံး ဖွင့်လှစ်မည့်သတင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ `ယင်းရုံးဖွင့်လှစ်ရန်ကိစ္စမှာ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် မကိုက်ညီသဖြင့် ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း´
အထက်ပါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၏ ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာများတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ပြည်သူများအကြား OIC ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ခွင့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝေဖန်ပြောကြား ချက်များ ဖြစ်ပေါ်နေ၍ ပြန်လည်သတိရ နားလည်သဘောပေါက်စေရန် ထပ်မံ တင်ပြ ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
[Read More : http://www.president-office.gov.mm/zg/?q=briefing-room/press-conferences/2012/10/21/id-2646]
MAT- ထိုင်းအမျိုးသမီးကို မြန်မာအလုပ်သမား၂ဦးအဓမ္မပြုကျင့်”
နိုဝင်ဘာ ၁၁ (ကိုတီး)
ဘန်ကောက်မြို့မြောက်ဘက် ၄၆ကီလို မီတာအကွာတွင်ရှိသော ပထုံဌာနီနယ်မြေ အမှတ်ရ ၇ ရေမြောင်းအမှတ်(၁)ရပ်ကွက်တွင်ရှိသော ချင်လ ဘန်ခန် ကားလမ်းမ နံဘေးတစ်နေရာတွင်ယမန်နေ့ ညဥ့် ၁နာရီခန့်တွင် အလုပ်မှ ပြန်လာသည့် ထိုင်း အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးအား မြန်မာအလုပ် သမား ၂ဦးက အဓမ္မပြုကျင့်ကြောင်း ထိုင်းရတ်သတင်းစာ တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
အသက် ၁၈နှစ်အောက်အရွယ် apple အမည်ရှိ ထိုင်းအမျိုးသမီး ငယ်တစ်ဦး အား မြန်မာ ၂ဦးက အဓမ္မပြုကျင့်ရာ အော်ဟစ် အကူညီတောင်းသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၀ိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးသဖြင့် အသက် ၂၆နှစ် အရွယ် မောင်ကျော်နိုင် ဆိုသူအားထိုင်းရဲများကဖမ်းဆီးမိခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဦးမှာ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားခဲ့သည်။
မောင်ကျော်နိုင်က အရက်မူ၍ လုပ်ခဲ့မိကြောင်း ၀န်ခံထွက်ဆိုခဲ့သည်။ ရဲစခန်းက ဥပဒေကြောင်းအရ ဆက်လက် အရေးယူဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းစာတွင်ရေးသားထားသည်။
ထိုင်းအလုပ်သမားတစ်ဦးအား ရခိုင်အလုပ်သမတစ်ဦးက ဓါးဖြင့်ထိုး”
နိုဝင်ဘာ ၁၁ (မင်းဘခက်)
မဟာချိုင်နယ်မြေ CPF ပုဇွန်အခွံခွာသည့် အလုပ်ရုံတွင် စကားအချေအတင်ဖြစ်ရာမှ ထိုင်းယောက်ျားလျှာ အလုပ်သမားတစ်ဦးအား ရခိုင်အလုပ်သမ တစ်ဦးကဓါးဖြင့်ထိုးလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် မစောမြနွယ် သည် နိုဝင်ဘာလ ၇ရက်နေ့ နေ့လည် ထမင်းစားနား ခါနီး နေ့လည် ၁၁နာရီခွဲအချိန်တွင် ထိုင်းယောက်ျား လျှာ နှင့် စကားပြောနေသည့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မ….. အား ထမင်းအတူတူစားကြရန် သွားခေါ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ ထိုင်းယောက်ျားလျှာက ခေါ်ရကောင်းလား ဟူ၍ မစောမြနွယ် ၏ လည်ပင်းကို ညှစ်ပါသည်။
မစောမြနွယ် က ကြောက်လန့်သွားပြီး ပုဇွန် အသားနွှာသည့် ဓါးဖြင့် ယောက်ျားလျှာ၏ ၀မ်းဗိုက် ကို ထိုးလိုက် မိကြောင်း ရဲစခန်း တွင် ထွက်ဆိုပါသည်။ ယခုအခါ မစောမြနွယ် အား မဟာချိုင် ထောင်ချုပ် တွင် ခံနေရပြီး ထိုင်းယောက်ျားလျှာမှာ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်း၊ ဒဏ်ရာသက် သာသွားပြီြး ဖစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့ အဖဦးလှမောင် +ဒေါ်ခင်စန်းရီ တို့၏သမီး မစောမြနွယ် မှာ အပျို တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမ၏ အမှုကိစ္စအား မှန်ကန်စွာ ဖြစ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးရေး ဖေါင်းဒေးရှင် FED မှ ရှေ့နေနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ MAT တို့ကကူညီနိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြ ကြောင်း သိရှိရသည်
လက်ရှိအခြေအနေအပေါ် (ယူအန်အက်ဖ်စီ) UNFC ထုတ်ပြန်ကြေညာ-RCSS/SSA
Myanmar-BURMA PROTEST NO OIC – OIC လာရောက်မည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍် ဆန္ဒဖော်ထုတ်video
RAKHINE NEWS GROUP OIC ဆန္ဒပြရန်ခွင့်ပြုချက်ကျပြီ
OIC ရခိုင်ပြည်နယ် သို့လာရောက်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခြင်း ရန်ခွင့်ပြုချက်တင်ရာ ၁၅ နိုဝင် ဘာ ၂၀၁၃တွင် ဆန္ဒပြရန် ခွင့်ပြုချက် ရပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေလေယဉ်ကွင်း တွင် နံနက် ၈ နာရီတွင် စုရုံးကြရန်
အချိန်=နံနက် ၉နာရီမှ ၁၂နာရီ
U WIRA THU :“မြန်မာပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒမှန်”14.11.2013 ရက်နေ့မှာ OIC
14.11.2013 ရက်နေ့မှာ OIC အကြီးအကဲများ မြန်မာပြည်လာမည်ဟု သိရသော ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူများက OIC ကို ပေးချင်သည့် မက်ဆေ့ခ်ျများပေးကြတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
OIC အကြီးအကဲများ ၄င်းတို့လူမျိုး ၄င်းတို့ ဘာသာဝင်များကို လာရောက်တွေ့ဆုံ အားပေးကြသည်ကို လက်ခံကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာကို အသက်သွင်းခြင်း၊ ၈၂-ဥပဒေကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အစိုးရအား အတင်းအကြပ် ဖိအားပေး အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းများကို လုံးဝ (လုံးဝ) အလိုမရှိကြောင်း၊ စစ်တွေ၊ ရန်ကုန်၊ မိတ္ထီလာ မြို့ကြီးများမှ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြည်သူများက ဆိုင်းဘုတ်များကိုင်ကာ OIC ကို ကြိုဆိုနေကြတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အင်းစိန်မြို့နယ် အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေး (ဗဟို) နှင့် မန္တလေး အပါအဝင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ရဟန်းသံဃာများက OIC အဖွဲ့ ပြဿနာများယူလာ-မလာ။ ပြဿနာများ ဖန်တီးခဲ့-မခဲ့ အကဲခတ်လေ့လာကာ လိုအပ်သော တုန့်ပြန်မှုများကို မဆိုင်းမကွ တုန့်ပြန်ဖို့ရန် အဆင်သင့်ပြင်ထားကြကြောင်း သိရသည်။